merolagani - सबै प्रदेशमा आज बजेट सार्वजनिक हुँदै, कुन प्रदेशको बजेट आकार कति ?
सबै प्रदेशमा आज बजेट सार्वजनिक हुँदै, कुन प्रदेशको बजेट आकार कति ?
देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आज असार १ गते आइतबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्।सात वटै प्रदेशहरुले ठूला आयोजनाहरुलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्दै कूल साढे २ खर्ब आकारको बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका छन्।
केन्द्र सरकाले बजेट सार्वजनिक गरेको १८ औं दिनमा प्रदेशहरुको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक हुन लागको हो।
हरेक प्रदशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गते ल्याउनैपर्ने व्यवस्था छ ।
आइतबार दिउँसो बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले बजेट पेस गर्नेछन्। देशको राजधानी समेत रहेको प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा धेरै करिब ५० अर्बको बजेट सार्वजनिक हुने भएको छ।
त्यसैगरि प्रदेश नम्बर १ ले ४० अर्ब, प्रदेश २ ले ३५ अर्ब, गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब, प्रदेश ५ ले ३५ अर्ब, कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब र सुदुरपश्चिम प्रदेशको २९ अर्बको बजेट सार्वजनिक हुनेछ ।
संघीय सरकारले छुट्याएको वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड र प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याउन लागेका छन् । ठूला आयोजना बजेटको प्राथमिकतामा राख्दै सबै प्रदेशले कृषि, पर्यटन, सडक, खानेपानी र उद्यमलाई उच्च महत्व दिएका छन्।